हत्या गरिएका नेकपा नेताकी पत्नी भन्छिन्, ‘पैसा चाहिँदैन, इन्साफ दिलाइदिनुस्’ – Krazy NepaL
हत्या गरिएका नेकपा नेताकी पत्नी भन्छिन्, ‘पैसा चाहिँदैन, इन्साफ दिलाइदिनुस्’
October 28, 2020 628
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता मुकेश चौरसियाको हत्याले पर्सा आतंकित छ ।
पतिको वियाेगमा शोकमग्न सुनिता चौरसिया न्यायका लागि हारगुहार गर्दैछिन् । तर त्यसकाे कुनै सुनुवाइ छैन ।
‘मलाई धन सम्पति चाहिँदैन, इन्साफ दिलाइदिनुस्,’ सुनिताले भनिन् ।
मुकेशका भाई महेशका अनुसार प्रहरीले नेकपा नेता राजकुमार गुप्ताको नाम हटाएर जाहेरी दिन भनिरहेका छन् । तर राजकुमार नै आफ्नो दाईको हत्याका मुख्य योजनाकार रहेको उनको दाबी छ ।
‘मेरो दाईलाई राजकुमारले पहिले पनि धम्की दिएका थिए । र, अहिले पनि उनैले योजना बनाएर मार्नलाई गुण्डा पठाएका थिए,’ उनले भने ।
मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेकपाको गाउँपालिका कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पार्टीकै दुई समूहबीचको विवादपछि भएको झडपमा परी घाइते भएका चौरसियाको वीरगञ्जस्थित न्युरो हस्पिटलमा गएको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो । चौरसियाको शव पोष्टमार्टमका लागि अझै नारायणी अस्पतालमै राखिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री मातृका यादव निकट रहेका उनी नेकपाको गाउँपालिकाका सचिव र जिल्ला कमिटी सदस्य थिए । मुकेशको हत्या घटना विषयमा सोधपुछका लागि घटना भएकै दिन प्रहरीले पूर्व सभासद् एंव नेकपाका नेता राजकुमार गुप्तासहित ८ जनालाई पक्राउ समेत गरेको थियो । तर, केही बेरमै गुप्तासहितका ५ जनालाई छोडिएको थियो । हाल हनिफ मियाँ, देवा सहनी र शोकदीन गद्दीसहित तीन जना हिरासतमा छन् ।
कार्यक्रम बिथोल्न आएका नेकपा नेता गुप्ता पक्षका उत्तम तिवारी र चिन्टु तिवारी घाइते भइ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । तर, उनीहरु दुबै अस्पतालबाटै फरार भएका छन् । मुकेशको अवस्था गम्भीर रहेको खबर पाएपछि मेडिकल कलेजमा उपचाररत ती दुवै भागेका हुन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्यको समेत खोजी भइरहेको बताउँदै आएको छ । तर, मुकेशको हत्या भएको छैठौँ दिनमा समेत प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नु भने अनाैठाे छ ।
प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेपछि नेकपा नेता कार्यकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गर्दै न्याय मागिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीले पर्सा प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तको पुत्लासमेत जलाउँदै आएका छन् । यसका साथै दोषीलाई कडा कारबाही र किटानी जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दै नेकपा कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
लगातार भइरहेको धर्ना र विरोध प्रदर्शनमा नेकपा पर्साका इन्चार्ज रामचन्द्र साह, प्रदेश २ का सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, पर्सा सचिव विजय महतोका साथै जिल्ला र प्रदेश कमिटी सदस्य, भातृसंगठनका केन्द्रीय सदस्यलगायत सहभागी हुँदै आएका छन् । प्रहरी कार्यालय अगाडिको धर्नामा नेकपाका नेता पूर्वमन्त्रीद्वय मातृका यादव र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि वीरगन्ज आएर सहभागीता जनाइसकेका छन् । घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपासँगै प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाले समेत विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् ।
९ कात्तिकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको माग गरेका थिए । हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पनि प्रहरीले जाहेरीसमेत दर्ता गर्न नमान्नु आश्चर्यको विषय भएको प्रचण्डले विज्ञप्तिमा भनेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ८ कात्तिकमा विज्ञप्ति निकालेर मुकेशको हत्या घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विज्ञप्तिमा मुकेश हत्याको छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गरिएकाे छ। चौतर्फी विरोध हुँदा पनि प्रहरीले भने किटानी जाहेरी दर्ता गरेको छैन ।
किन भयो विवाद ? कसरी मारिए चौरसिया ?
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भइसकेयता प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लापछि अधिकांश स्थानीय तहमा समेत समायोजन विवाद कायमै छ । पर्साका नेकपा अध्यक्ष प्रभु हजाराका अनुसार पर्सामा रहेका जम्मा १४ स्थानीय तहमध्ये ४ वटामा पालिकामा बढी विवाद देखिएको छ ।
उनका अनुसार अन्य ठाउँमा समेत असन्तुष्टि रहे पनि ठोरी गाउँपालिका, छिपहरमाइ नगरपालिका, बहदुरबामाई नगरपालिका र जिरा भवानी गाउँपालिकामा मुख्य विवाद थियो । जसमध्ये प्रदेश कमिटीको निर्णय विपरत ठोरी, जिराभवानी गाउँपालिका र छिपहरमाई नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै दुई/दुई वटा कमिटी बनाइएको छ ।
तर विन्दावासिनी गाँपालिकाकामा खासै विवाद थिएन । आक्रमणै हुने खालको विवाद पहिलेदेखि गाउँपालिकामा नरहेको गाउँ कमिटीका अध्यक्ष विक्रम चौरसिया समेत बताउँछन् ।
गएको ६ कात्तिक बिहान गाउँपालिका कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । नयाँ कमिटी गठन हुँदा उपस्थित सबै जना उत्साहित थिए । अध्यक्ष विक्रम चौरसियासहित केही नेता कार्यकर्ता खाना खान गएका थिए ।
त्यही समयमा १५/२० जनाको समूह आयो ।
‘कमिटीमा हाम्रो नाम किन राखिनस् ? हामीलाई किन बोलाइस् ? हामी कार्यक्रम हुन दिदैनौँ भन्दै ब्यानर च्यात्न खोज्दा धक्कामुक्की र विवाद भयो,’ अध्यक्ष विक्रम चौरसियाले भने, ‘पछि उनीहरू लाठी भाटाले हिर्काउन थाले । टाउकोमै बाँसको फाटा बजार्न थालेपछि मुकेशलगायत अरूले पनि आफ्नो रक्षाका लागि लाठी उठाए । तर, उनीहरू योजनाबद्ध हिसाबले हामीलाई मार्न आएका थिए,’ उनले भने ।
दुईतर्फी झडपको क्रममा मुकेशको टाउकोमै बाँसको फाटा बजारियो । रक्ताम्य भएका उनी बेहोस भए । कार्यक्रम बिथोल्न आएका समूहका समेत दुई जना घाइते भए ।
घाइते भएका ६ जनालाई तत्कालै वीरगञ्जस्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइयो । केहीबेरपछि फोन गर्दा अस्पतालले चौरसियाकाे अवस्था खतरामुक्त रहेको सुनाएको विक्रम चौरसियाले बताए । ‘अस्प्तालमा फोन गर्दा समान्य चोटपटक लागेको भनेर भनियो । हामीले पनि ढुक्क भएर कार्यक्रम गर्‍याैँ । उहाँको शपथपछि गराउने सहमति भएको थियो,’ उनले भने । तर धेरै बेरपछि सिटी स्क्यान गर्दासमेत उनलाई होस नआएको विक्रमले बताए । भोलिपल्ट ९ बजे मुकेशको मृत्यु भयो । गाउँ कमिटी अध्यक्ष विक्रमका अनुसार पूर्वसंविधानसभा सदस्य गुप्ताले अध्यक्ष आफ्नो लाइनमा आउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
एक सालअघि नै उहाँले धम्की दिनुभएको थियो । त्यही रिसइबीमा गुण्डा पठाएर हामी दुबै जनालाई मारिदिने उहाँको योजना थियो,’ विक्रमले थपे, ‘गुण्डा र हत्यारा पाल्ने हाम्रो सरकारको दबाबमा जाहेरी दर्ता भएन भने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै जान्छौँ ।’
घटनामा संलग्न भनिएका केही व्यक्ति जनता समाजवादी पार्टीको रहेको समेत उनको दाबी छ । तर केही नेताका अनुसार करिब एक वर्षअघि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबाट नेकपा नेता रघुवीर महासेठले उनीहरूलाई नेकपामा प्रवेश गराएका थिए ।
किन भएन जाहेरी दर्ता ?
मृतक परिवारका सदस्य घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वसंविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता राजकुमार गुप्तालगायत १२ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दिन पुगेका थिए ।
नेकपाका जिल्ला ईन्चार्ज रामचन्द्र साहका अनुसार मुकेशमाथि आक्रमण भएकै दिन बाह्रै जनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीडीओ र एसपीबीच सहमति भएको थियो । तर नेकपाकै अर्का पक्ष भने घटनामा संलग्नको बचाउमा उत्रिएका छन् ।
पीडित परिवार र प्रचण्ड तथा माधव नेपाल समूहका नेताकाे दाबी अनुसार घटनाका मुख्य योजनाकार पूर्वएमाले खेमाका संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेका राजकुमार गुप्ता हुन् ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न गुप्ताले जिल्लाका अधिकांश नेतालाई एक्लैले पालेर राख्ने क्षमता भएका कारण उनी प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । ‘गृहमन्त्री, डीआईजी, सीडीओ सबैले जाहेरी दर्ता गर्न भनिसकेको छ तर बालुवाटारले दोषीलाई बचाउन खोजेको छ,’ पर्साका नेकपा ईन्चार्ज रामचन्द्र साहले आराेप लगाए, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सही रिपोर्ट नपुगेको हो कि के भएको हो ? घटना घटाउने मुख्य योजनाकारलाई किन जोगाइँदै छ ? हामी कानुनी राज्य चाहन्छौँ तानाशाही होइन ।’
पर्सा प्रहरी प्रुमुख गंगा पन्तले भने घटनामा संलग्न नै नदेखिएका व्यक्तिको नाम जाहेरीमा उल्लेख गरिएकाले उनको नाम हटाएर जाहेरी दिन पीडित पक्षलाई आग्रह गरेको बताइन् । ‘हामीले भिडियो र फुटेजहरू हेर्दा घटनामा संलग्नै नरहेका व्यक्तिको नाममा जाहेरी दिइएको छ । हामीले उनको नाम फिर्ता गरेर जाहेरी दिन भनेका छौँ,’ पन्तले भनिन् ।
उनका अनुसार नेकपा नेता गुप्ता घटनाका बेला कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । तर नेकपा ईन्चार्ज साह भन्छन्, ‘उनैको योजनामा घटना घटाइएको हो । प्रहरीले पहिले मुद्दा दर्ता गरोस् न । छानविन गरोस् न । जाहेरी दर्ता गरिएको व्यक्ति दोषी छैन भने छानविनमा खुलि हाल्छ नि ।’
Prevसीमाका हिरो किसमान
Nextनेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक मंसिर १५ सम्मका लागि सर्‍यो
बिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारणहरु
सम्झनामै सिमित सविताको टिकटक कलेक्सन ( भिडियो हे,र्नुस )
हातको औँला यस्तो हुने व्यक्ति हुन्छन् अधिक पैसावाल, तपाईको पनि छ की ?
घरमा रोप्नुहोस् यो बिरूवा, जसमा हुन्छ धनतान्ने चुम्बक जस्तै शक्ति
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45567)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24175)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18665)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17036)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (15118)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (14031)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13118)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (13062)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12973)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12567)